Madaxweynaha Tunuusiya oo go’aan deg-deg ah ka soo saaray Xaaladda dalkaasi | HalQaran.com
Tunisa (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dalka Tuniisiya ayaa go’aansaday in muddo bil ah oo dheeraad ah lagu kordhiyo xaaladda deg-degga ah ee dalkaas saarneyd, iyadoo dhaqdhaqaaqa Al-nnahda uu ugu baaqay mas’uuliyiinta dalkaas in ay sii daayaan dhammaan maxaabiistii loo xer-xeray bannaanbaxyadii ka socday dalka.
Sida lagu daabacay Wargeyska ku hadla Afka Dowlada ee Al-Raa’id, cadadkiisii ​​maanta, ayaa lagu sheegay in xaaladdii degdegga aheed la kordhiyay laga bilaabo 20-ka Janaayo, ayna sii jiri doonto ilaa 18-ka bisha soo socoto ee Febraayo.
Madaxweynaha Tunuusiya Qeys Siciid, ayaa markii u horaysay xaaladdii degdega ah ee dalkiisa ku kordhiyay Lix bilood, taasi oo ka bilaabaneeysay 26-kii December 2020 ilaa June 23, 2021.
Sidoo kale dhawr jeer ayuu Madaxweynaha muddo kordhin ku sameeyay xaaladda deg-dega ah ee daliisa saarneed, iyadoo ay barbar socdeen isoo baxyo looga cabanaayo Xayiraada.
War qoraal ah oo Jimcihii ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Tunuusiya, ayaa lagu sheegay in dibad baxayaal careeysan ay weerar ku soo qadeen dhawr xero oo ay lahayeen Ciidamada Ammaanka.
Waddankna Tunuusiya ayaa waxaa ka jiray qalalaase siyaasadeed tan iyo 25-kii bishii July ee la soo dhaafay, markaasoo Madaxweyne Saacid uu ku dhaqaaqay tallaabooyin ay ka mid ahayeen in la hakiyo Awoodaha Baarlamaanka, xil ka qaadistii Ra’iisul Wasaaraha, iyo tallaabooyin kale.